မျက်ခုံးတက်တူးမထိုးခင်နဲ့ ထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဘာတွေ ဂရုစိုက်သင့်လဲ? - For her Myanmar
မျက်တောင်ဆက်တာနဲ့ မျက်ခုံးတက်တူးထိုးတာက ၂၀၁၈ နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေ ခေတ်စားလာပြီး အခုချိန်ထိဝက်ဝက်ကွဲ ဆက်ကြ၊ ထိုးကြတုန်းဆိုတာ ယောင်းတို့သိကြတယ်ဟုတ်? အရင်တုန်းကတော့ တက်တူးဆိုတာနဲ့ အလိုလို ကြောက်နေတာမျိုးတွေ၊ “ထိုးလိုက်ရင် ဆေးကအစိမ်းရောင်ကြီးနဲ့ မလှမပပုံကို တစ်သက်လုံးမျက်နှာပေါ်တင်ထားရမှာ” ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေကြောင့် မျက်ခုံးတက်တူးထိုးဖို့ဆို တွန့်နေတတ်ကြပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းသက်သာပြီး တစ်ခါထိုးထားရုံနဲ့ နှစ်ချီခံတဲ့ ဒီနည်းလမ်းကို ဦးစားပေးရွေးချယ်လာကြပါပြီ။ ဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း တာဝန်အရတော့ ပြောခွင့်ပေးပါပေါ့။ မျက်ခုံးတက်တူးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Before & After Care လေးကို ဒီနေ့ဆောင်းပါးထဲမှာ နှင်းနဲ့ အတူတူ လေ့လာကြစို့နော်။
မထိုးခင်ဂရုစိုက်ရမည့်အချက်များ (Before Care)
(၁) ဓာတုပစ္စည်းများများပါပြီး အားပြင်းတဲ့မိတ်ကပ်၊ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ပစ္စည်းတွေ မသုံးရပါဘူး။
(၂) မျက်ခုံးတက်တူးမထိုးခင်အချိန်မှာ အားအရမ်းစိုက်ထုတ်ရတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေ မလုပ်ပါနဲ့။
(၃) ငါးကြီးဆီ၊ ဗီတာမင် E စတာတွေကို မထိုးခင် ၄၈ နာရီအတွင်း လုံးဝမစားပါနဲ့။
(၄) မျက်ခုံးမွှေးရိတ်တာ၊ Waxing လုပ်တာနဲ့ နှုတ်တာ စတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို မျက်ခုံးမရိတ်ခင် ၃ ရက်အလိုမှာကြိုလုပ်ထားပါ။
(၅) မထိုးခင်နှစ်ရက်အလိုမှာ အရက်၊ ကဖိန်းပါတဲ့အစားအသောက်တွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
(၆) ရာသီစက်ဝန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သွားမထိုးပါနဲ့။ အကယ်၍ထိုးမယ်ဆိုရင်လည်း လုပ်ပေးမယ့်ပညာရှင်ကို ကြိုတင်အသိပေးထားပါ။
Related Article >>> မျက်ခုံးတက်တူးအမျိုးအစား (၃) မျိုးအကြောင်း
ထိုးပြီးချိန်တွင်ဂရုစိုက်ရမည့်အချက်များ (After Care)
မျက်ခုံးတက်တူးထိုးတဲ့အခါ မထိုးခင်အချိန်ထက် ထိုးပြီးအချိန်က ပိုပြီးဂရုစိုက်ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အနာမကျက်ခင် အနာဖေးကိုခွာလိုက်တာမျိုး၊ ယားလို့ကုတ်လိုက်တာမျိုး၊ ချွေးထွက်နေလို့ အတင်းပွတ်သုတ်လိုက်တာမျိုးနဲ့ မျက်နှာကို ဆပ်ပြာ၊ ရေတွေနဲ့စွတ်သစ်ပြီး ပွတ်သုတ်တာမျိုးတွေက မျက်ခုံးတက်တူးကို အရောင်မှိန်သွားစေတာမျိုး၊ ဟိုတစ်ကွက်ဒီတစ်ကွက်ဖြစ်သွားစေတာမျိုး ဖြစ်တတ်တာကြောင့် အနားဖေးတက်တဲ့ ၃ ရက်နဲ့ အနာကျက်မယ့် ၁၀ ရက်အတွင်းမှာတော့ ဒီအချက်လေးတွေကို အထူး ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။
(၁) တက်တူးထိုးထားတဲ့နေရာကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထားပေးပါ။
(၂) တက်တူးထိုးပြီး ၃ ရက်အတွင်း ရေလုံးဝမထိရပါဘူး။ ၃ ရက်ကျော်သွားရင်တော့ ရေနဲ့ဖွဖွလေးသစ်လို့ရပေမဲ့ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာ၊ မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးရည်၊ မိတ်ကပ်ဖျက်တဲ့ခရင်မ် စတာတွေကိုလုံးဝ (လုံးဝ) သုံးလို့မရပါဘူး။
(၃) အနားဖေးက ယားလာရင်လည်း လက်သည်းနဲ့အတင်းကုတ်ဖဲ့တာမျိုး၊ အနာဖေးကိုခွာချလိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲ လက်ထိပ်လေးနဲ့ပဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းဖိပြီး အယားသက်သာအောင် လုပ်ပေးပါ။ (သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ အနာကျက်ဆေးတော့ သောက်လို့ရပါတယ်။)
(၄) တစ်လအတွင်း နေရောင်ခြည်နဲ့တိုက်ရိုက်လုံးဝ မထိတွေ့ပါနဲ့။
(၅) ၁၀ ရက်အတွင်း ချွေးများများထွက်စေမယ့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းများကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
(၆) မျက်နှာကိုဓာတုပစ္စည်းပါဝင်မှုနှုန်းများတဲ့ ပစ္စည်းတွေသုံးပြီးသစ်တာမျိုး၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်တာမျိုး၊ အတင်းနှိပ်နယ်တာမျိုးတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
(၇) နှစ်ပတ်အတွင်း ရေလုံးဝ မကူးပါနဲ့။
(၈) တစ်ပတ်အတွင်း မျက်ခုံးမွှေးကို ခဲနဲ့ထပ်ဆွဲတာ၊ အရောင်ထပ်တင်တာမျိုးတွေ လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။
(၉) တက်တူးထိုးထားတဲ့ နေရာတစ်ဝိုက်မှာ မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
Related Article >>> တစ်နေ့ကို ၀.၁ စက္ကန့်အတွင်း ဒီလိုမျက်ခုံးလှလှလေးရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲ?
မျက်ခုံးတက်တူးထိုးတဲ့နေရာမှာ အရေးအကြီးဆုံးက အနာကျက်ဖို့ပါပဲနော်။ ဒီလိုအနာကျက်ဖို့အတွက် အချိန်က ၁၀ ရက်လောက်ပဲကြာတာဆိုပေမဲ့ လူ့သဘာဝအရတော့ တစ်ခုခုထူးထူးခြားခြားလုပ်ထားရင် လုပ်ထားတဲ့နေရာကိုပဲ သေချာဂရုစိုက် အာရုံထားတတ်တာမို့ ယားယံတဲ့အချိန်ကုတ်မိတာမျိုး၊ အနာဖေးစကွာတဲ့အချိန်မှာ ကွာကျလာတာကို စိတ်မရှည်တော့ဘဲ ဆွဲခွာတာမျိုးတွေက ယောင်းတို့ရဲ့တက်တူးကို အကျည်းတန်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခက်ခဲပေမဲ့ သေချာစိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ အနာကျက်အောင်ပဲ စောင့်ကြပါလို့။
References : browmethod, eyebrowdoctor
မကျြတောငျဆကျတာနဲ့ မကျြခုံးတကျတူးထိုးတာက ၂၀၁၈ နှဈလယျပိုငျးလောကျကနေ ခတျေစားလာပွီး အခုခြိနျထိဝကျဝကျကှဲ ဆကျကွ၊ ထိုးကွတုနျးဆိုတာ ယောငျးတို့သိကွတယျဟုတျ? အရငျတုနျးကတော့ တကျတူးဆိုတာနဲ့ အလိုလို ကွောကျနတောမြိုးတှေ၊ “ထိုးလိုကျရငျ ဆေးကအစိမျးရောငျကွီးနဲ့ မလှမပပုံကို တဈသကျလုံးမကျြနှာပျေါတငျထားရမှာ” ဆိုတဲ့ အယူအဆတှကွေောငျ့ မကျြခုံးတကျတူးထိုးဖို့ဆို တှနျ့နတေတျကွပမေဲ့ အခုနောကျပိုငျးမှာတော့ အခြိနျကုနျ လူပငျပနျးသကျသာပွီး တဈခါထိုးထားရုံနဲ့ နှဈခြီခံတဲ့ ဒီနညျးလမျးကို ဦးစားပေးရှေးခယျြလာကွပါပွီ။ ဆိုတော့ ထုံးစံအတိုငျး တာဝနျအရတော့ ပွောခှငျ့ပေးပါပေါ့။ မကျြခုံးတကျတူးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ Before & After Care လေးကို ဒီနဆေ့ောငျးပါးထဲမှာ နှငျးနဲ့ အတူတူ လလေ့ာကွစို့နျော။
မထိုးခငျဂရုစိုကျရမညျ့အခကျြမြား (Before Care)
(၁) ဓာတုပစ်စညျးမြားမြားပါပွီး အားပွငျးတဲ့မိတျကပျ၊ အသားအရထေိနျးသိမျးတဲ့ပစ်စညျးတှေ မသုံးရပါဘူး။
(၂) မကျြခုံးတကျတူးမထိုးခငျအခြိနျမှာ အားအရမျးစိုကျထုတျရတဲ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုတှေ မလုပျပါနဲ့။
(၃) ငါးကွီးဆီ၊ ဗီတာမငျ E စတာတှကေို မထိုးခငျ ၄၈ နာရီအတှငျး လုံးဝမစားပါနဲ့။
(၄) မကျြခုံးမှေးရိတျတာ၊ Waxing လုပျတာနဲ့ နှုတျတာ စတဲ့လုပျငနျးစဉျတှကေို မကျြခုံးမရိတျခငျ ၃ ရကျအလိုမှာကွိုလုပျထားပါ။
(၅) မထိုးခငျနှဈရကျအလိုမှာ အရကျ၊ ကဖိနျးပါတဲ့အစားအသောကျတှကေို ရှောငျကွဉျပါ။
(၆) ရာသီစကျဝနျးဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာ သှားမထိုးပါနဲ့။ အကယျ၍ထိုးမယျဆိုရငျလညျး လုပျပေးမယျ့ပညာရှငျကို ကွိုတငျအသိပေးထားပါ။
Related Article >>> မကျြခုံးတကျတူးအမြိုးအစား (၃) မြိုးအကွောငျး
ထိုးပွီးခြိနျတှငျဂရုစိုကျရမညျ့အခကျြမြား (After Care)
မကျြခုံးတကျတူးထိုးတဲ့အခါ မထိုးခငျအခြိနျထကျ ထိုးပွီးအခြိနျက ပိုပွီးဂရုစိုကျရပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အနာမကကျြခငျ အနာဖေးကိုခှာလိုကျတာမြိုး၊ ယားလို့ကုတျလိုကျတာမြိုး၊ ခြှေးထှကျနလေို့ အတငျးပှတျသုတျလိုကျတာမြိုးနဲ့ မကျြနှာကို ဆပျပွာ၊ ရတှေနေဲ့စှတျသဈပွီး ပှတျသုတျတာမြိုးတှကေ မကျြခုံးတကျတူးကို အရောငျမှိနျသှားစတောမြိုး၊ ဟိုတဈကှကျဒီတဈကှကျဖွဈသှားစတောမြိုး ဖွဈတတျတာကွောငျ့ အနားဖေးတကျတဲ့ ၃ ရကျနဲ့ အနာကကျြမယျ့ ၁၀ ရကျအတှငျးမှာတော့ ဒီအခကျြလေးတှကေို အထူး ဂရုစိုကျစခေငျြပါတယျ။
(၁) တကျတူးထိုးထားတဲ့နရောကို သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျးထားပေးပါ။
(၂) တကျတူးထိုးပွီး ၃ ရကျအတှငျး ရလေုံးဝမထိရပါဘူး။ ၃ ရကျကြျောသှားရငျတော့ ရနေဲ့ဖှဖှလေးသဈလို့ရပမေဲ့ မကျြနှာသဈဆပျပွာ၊ မိတျကပျဖကျြဆေးရညျ၊ မိတျကပျဖကျြတဲ့ခရငျမျ စတာတှကေိုလုံးဝ (လုံးဝ) သုံးလို့မရပါဘူး။
(၃) အနားဖေးက ယားလာရငျလညျး လကျသညျးနဲ့အတငျးကုတျဖဲ့တာမြိုး၊ အနာဖေးကိုခှာခလြိုကျတာမြိုးမလုပျဘဲ လကျထိပျလေးနဲ့ပဲ ဖွညျးဖွညျးခငျြးဖိပွီး အယားသကျသာအောငျ လုပျပေးပါ။ (သကျဆိုငျရာဆရာဝနျရဲ့ ညှနျကွားခကျြနဲ့ အနာကကျြဆေးတော့ သောကျလို့ရပါတယျ။)
(၄) တဈလအတှငျး နရေောငျခွညျနဲ့တိုကျရိုကျလုံးဝ မထိတှပေ့ါနဲ့။
(၅) ၁၀ ရကျအတှငျး ခြှေးမြားမြားထှကျစမေယျ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားလကေ့ငျြ့ခနျးမြားကို ရှောငျကဉျြပါ။
(၆) မကျြနှာကိုဓာတုပစ်စညျးပါဝငျမှုနှုနျးမြားတဲ့ ပစ်စညျးတှသေုံးပွီးသဈတာမြိုး၊ ခပျကွမျးကွမျးပှတျတာမြိုး၊ အတငျးနှိပျနယျတာမြိုးတှကေို ရှောငျကွဉျပါ။
(၇) နှဈပတျအတှငျး ရလေုံးဝ မကူးပါနဲ့။
(၈) တဈပတျအတှငျး မကျြခုံးမှေးကို ခဲနဲ့ထပျဆှဲတာ၊ အရောငျထပျတငျတာမြိုးတှေ လုံးဝမလုပျပါနဲ့။
(၉) တကျတူးထိုးထားတဲ့ နရောတဈဝိုကျမှာ မိတျကပျလိမျးခွယျခွငျးကို ရှောငျကွဉျပါ။
Related Article >>> တဈနကေို့ ဝ.၁ စက်ကနျ့အတှငျး ဒီလိုမကျြခုံးလှလှလေးရအောငျ ဘယျလိုလုပျထားတာလဲ?
မကျြခုံးတကျတူးထိုးတဲ့နရောမှာ အရေးအကွီးဆုံးက အနာကကျြဖို့ပါပဲနျော။ ဒီလိုအနာကကျြဖို့အတှကျ အခြိနျက ၁၀ ရကျလောကျပဲကွာတာဆိုပမေဲ့ လူ့သဘာဝအရတော့ တဈခုခုထူးထူးခွားခွားလုပျထားရငျ လုပျထားတဲ့နရောကိုပဲ သခြောဂရုစိုကျ အာရုံထားတတျတာမို့ ယားယံတဲ့အခြိနျကုတျမိတာမြိုး၊ အနာဖေးစကှာတဲ့အခြိနျမှာ ကှာကလြာတာကို စိတျမရှညျတော့ဘဲ ဆှဲခှာတာမြိုးတှကေ ယောငျးတို့ရဲ့တကျတူးကို အကညျြးတနျသှားစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခကျခဲပမေဲ့ သခြောစိတျရှညျရှညျလေးနဲ့ အနာကကျြအောငျပဲ စောငျ့ကွပါလို့။
Tags: after, Before, care, eyebrow, healing, process, tattoo